စီးပွားရေးသတင်းတို Archives | Page 26 of 30 | Frontier Myanmar
မြန်မာဧည့်သည်အရေအတွက် နှစ်ဆတိုးလာရန် စင်ကာပူ မေ ျှာ်မှန်း
စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် မြန်မာခရီးသည်အရေအတွက်ကို ယခုနှစ်တွင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက် နှစ်ဆတိုးလာစေရန် စင်ကာပူနိုင်ငံက မေ ျှာ်မှန်းထားသည်။ “၂၀၁၆ ခုနှစ် ပထမ ခုနစ်လအတွင်းမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ တိုးတက်မှုနှုန်း ၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုမိုပြီး မြန်မာဧည့်သည်တွေ စင်ကာပူကို လာရောက်ကြမယ်လို့ မေ ျှာ်လင့်ထားပါတယ်” ဟု စင်ကာပူခရီးသွားလုပ်ငန်းဘုတ်အဖွဲ့မှ.
ဟိုတယ်သစ်တည်ဆောက်ခွင့်များ ပိတ်ပင်ထားခြင်း မရှိသေး
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးအပါအဝင် ဒေသအချို့တွင် ဟိုတယ်သစ် တည်ဆောက်ခွင့်များ ပိတ်ပင်ထားခြင်းမဟုတ်ပဲ ပြန်လည် သုံးသပ်နေခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားသည်။ “တားမြစ်တယ်ဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုင်းငံ့တယ်ဆိုတာတောင် နည်းနည်း လွဲနေသေးတယ်။ အမှန်ကတော့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတွေအနေနဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု မမှားအောင် လုပ်ပေးတာပါ” ဟု.
မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် စတော့အိတ်ချိန်း စာရင်းဝင်တော့မည်
မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်သည် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ တတိယမြောက် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် စာရင်းဝင်ရန် အရည်အချင်း အကဲဖြတ်ချက်များကို အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း စတော့အိတ်ချိန်းက သြဂုတ် ၁၂ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။ အဆိုပါဘဏ်သည် လာမည့် သြဂုတ် ၂၆ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် ယင်း၏ အစုရှယ်ယာများကို ထုတ်ဝေ ရောင်းချမည်ဟုလည်း.
ရန်ကုန်မြိုလယ်ရှိ ဟိုတယ်နှင့် အိမ်ရာစီမံကိန်း ၂၀၂၀ တွင် ပြီးစီးမည်
ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ထားသည့် The Landmark Development စီမံကိန်းကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၆၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း အပြီးတည်ဆောက်သွားမည်ဟု သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများက ကြေညာခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့် ဘက်စုံတည်ဆောက်မှု စီမံကိန်း (Mixed Use Development) နှင့် The Peninsula Yangon.